Shiinaha oo mitir qaadaya mitir 33 mitir iyo alaabada iibiyaasha | Changyuan
Gawaarida matoorka ee loo yaqaan 'Conc pump pump' waa qalab gudbineed oo la taaban karo oo tayo sare leh kaas oo iskuxirgaaraya mashiinka bamgareynta ee sheyga isku dhafka ah iyo jaakada isku laabma ee qalabka jib iyo taakuleynta farshaxanka dharka jaranjarada, wuxuuna isku daraa howlaha wadista, bamgareynta iyo qeybinta. Sida caadiga ah waxaa loo adeegsadaa gawaarida qodista la taaban karo.It waxay ku habboon tahay gudbinta wax la taaban karo ee dhismaha magaalada, meelaha la deggan yahay, meelaha lagu madadaasho, garoommada iyo garoommada diyaaradaha.
Tiknoolajiyadda Xakamaynta Hawada
Goob qalad deg deg ah, waqti badbaadin in kabadan 50% oo ah cilad ogaanshaha,
Nidaamka kontaroolada korantada
Howlgal sahlan, dayactir sahlan, heerka guuldarrooyinka hoose, Qeybaha korantada ee ugu muhiimsan ayaa adkeynaya Schneider laga keenay Faransiiska, isku halaynta sarsare iyo iswada.
Kontoroolka gudeheeda iyo aaladaha fogfog ee wireless-ka ah labadaba waa qalabaysan yihiin waana fududahay inay shaqeeyaan .Appollo xakameeyaha fogfog ee bilaa wireless ayaa la socda mabaadii'da naqshadaynta injineernimada aadanaha oo leh muuqaal soo jiidasho leh, hawlgal sahlan iyo dabacsanaan sarreysa, Aaladaha qaylo dhaanta badan waxay xaqiijinayaan mashiinka ka shaqeeya amniga sare.
Heerka Gaarka-Saliidda iyo Qalabka Radiating
Si toos ah loo ogaado saliidaha dareeraha ah iyo heerkulka, ilaalinta nidaamka hawo-mareenka.
Tiknoolajiyadda Nabdoon ee Sirdoonka
Dhamaan khadadka weld by 100% ogaanshaha cilad aan dhaawac lahayn.
Teknolojiyada Haddiyada ee Hydraulic buuxa
Kaydinta waqtiga mooshinka 10%, kordhinta waxqabadka matoorka ee 20%.
Qaab dhismeedka teknoolojiyadda horukaca jib
Xarig dabacsanaan iyo wax ku ool ah, Xag la'aan.
Tikniyoolajiyadda ku-habboon awoodda is-beddelka
A: Waxaan haysanaa in kabadan 10 sano oo ah hagaajinta khibradaha mashiinada la taaban karo. Marka loo eego heerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ahba, dhammaan mashiinnadayada waxaa baaray oo si taxaddar leh oo taxaddar leh u leh hawl-wadeennadayada xirfad leh, waxaan tijaabin doonnaa qalab kasta ilaa uu sifiican uga shaqeynayo ka hor bixinta.
Waxaan dammaanad ka qaadaynaa in mashiin kasta oo aan u gaarsiinno macaamiisheenna ay ku jiraan waxqabad wanaagsan oo tayo sare leh
A: Waxaan ku takhasustay dib u habeynta mashiinada la taaban karo, waxaanan leenahay macaamiil fara badan oo adduunka ah oo dhan qiimaha ugu fiican, waxaan ku siin karnaa qiimo hoose sababta oo ah ilahayaga koowaad.
S: Ka waran adeeggaaga ee qalabka badeecada la taaban karo ee la taaban karo?
A: Waxaa naga go'an inaan u fidinno macaamiisheenna qalabka bambooyinka la taaban karo oo tayo leh oo tayo sare leh, taam ah oo sax ah iyo adeegyo dhakhso leh u keenaya. Macaamiisha waxaa loo dammaanad qaadayaa in marka ay gudbiyaan codsiyada qalabka ka hadha ama liiska magacyada alaabooyinka, shardiga ayaa si dhakhso leh oo ku habboon loo maarayn doonaa.
Moodel ： NJ52261THB33 Halbeega Farsamada Moodel ： Halbeega Farsamada
Gawaarida 'Mach-ine' dhererka buuxa 9850mm Nidaamka 'pumpi-ng parame-ters' Barakaca la taaban karo ee la taaban karo
Dhererka guud 3540 cadaadis sareeya 83m3/ h
Dhererka guud 2350mm Cadaadiska bamgareynta fekerka
Awoodda soosaarka / xawaaraha 177Kw / 2300RPM Gudbinta dhululubo dhexroor ah / garaac 230 / 1550mm
Dhumuc toosan 33m Dhexroor gudaha ah ee tuubbooyinka gudbinta 125mm
Dhererka toosan siman 29.5m Isku darka guud ee ugu badan 40mm
Qoto dheer oo toosan 19m Isku-darka sibidhka 160-220mm
dherer 7000mm Mugga haanta saliida 500L
dherer 5600mm Wareega korantada sare iyo mid hooseeya Beddelka otomaatigga
dherer 5400mm Habka nadiifinta biibiile Dhaq
dherer 5700mm Summadaha Qalabka wareejinta kiiska Jarmalka Spor / Zhejiang
dherer 5700mm Bamka bullaacadda Jarmalka Rexroth
Xaggo wareejin kara ± 360 o Fallaadhiisu badanyihiin Fallaadhiisu badanyihiin
Ballaca hore ee hore 5800mm Miisaan dheelitirka korantada Miisaan dheelitirka korantada
Dib u ballac ballaadhka ballaadhka 8350mm Manifold Eaton USA
Qaabka furfuridda Lugta hore Nooca X HBC / ohm, iwm. HBC / ohm, iwm.
Lugta dambe Lugaha wareega Schneider / Omron Schneider / Omron
Hore: 30 mitir bambo gacmeed
Xiga: 33 mitir bam-gacmeed